Ekipa orinasa | Zhongrong Technology Corporation Co., Ltd.
Mampiroborobo ny fandrosoana ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fanavaozana siansa maharitra
Ramatoa Dai Shumei:Solontena ara-dalàna, CEO, injeniera zokiny, mari-pahaizana Master EMBA avy amin'ny Oniversiten'i Tsinghua, mari-pahaizana licence avy amin'ny Oniversite Zhejiang. Mpikambana mpanatanteraka ao amin'ny Fikambanan'ny Vehivavy mpandraharaha China, delegasiona NPC. Manam-pahaizana avy amin'ny birao siantifika faritany Hebei ny zava-bita mpitsara mpitsara banky manam-pahaizana. Fananana patanty 11 nahazo alalana sy zava-bita siantifika 6 tamin'ny faritany. Mpamorona voalohany ny patanty 6 nahazo alalana ho an'ny teknolojia etanol fanaovana acétat acétat. Nahazo ny loka 20 nasionaly, faritany.
James Fang:Ny zom-pirenena amerikana zokiolona mitarika solika biolojika, mari-pahaizana dokotera avy amin'ny Oniversiten'i Cincinnati, dokotera avy amin'ny US Risk Manage Research Lab an'ny birao nasionaly fiarovana tontolo iainana. Lehiben'ny mpahay siansa sy injenieran'ny asa-tanana ankapobeny. Mpandresy ny loka "Science Achievement" 2008 avy amin'ny Birao Fiarovana ny tontolo iainana amerikana. Injeniera jeneraly miadidy ny fizahan-toetra ny famokarana fitaovana famokarana làlan'ny etanol fibre miaraka amin'ny famolavolana vola mitentina 66 tapitrisa dolara amerikana sy famolavolana injeniera ary famolavolana asa-tanana 90.000 taonina fibre etanol isan-taona miaraka amin'ny $ 200 tapitrisa. Fanandramana ary mitarika R&D mamaky tany an-tsokosoko ao anatin'izany ny fanitarana ny fandrosoana amin'ny famokarana ara-barotra, ny famolavolana indostrialy, ny fananganana injeniera, ny fandefasana fitaovana ary ny asan'ny orinasa.
Ramatoa Li Qiuyuan:Sekretera ho an'ny filankevi-pitantanana, talen'ny R&D, mari-pahaizana Master of Biochemical avy ao amin'ny Oniversite Zhejiang, injeniera zokiny. Talohan'izay dia naka teknisiana, mpitantana ny zavamaniry Tangshan pharmaceutis, talen'ny famokarana vice manager an'ny techbio biology engineering ltd.
Andriamatoa Yang Chunhui:vice GM, mpitantana ny famokarana, mari-pahaizana bakalorea ao amin'ny Tianjin University, injeniera zokiny. Talohan'ny nandraisan'ny mpanao asa tanana an'ny sampana antibiotika Tangshan pharmaceutika dia miambina amin'ny asa-tanana ho an'ny fanafody.
Andriamatoa Dai Shuzhong:Filankevi-pitantanana, talohan'ny nandraisan'ny talen'ny varotra Hebei solvent ltd. Talen'ny famokarana orinasa mpamokatra divay Tangshan Meiyuan divay. Mpitantana fivarotana Tangshan soul fireproof material Ltd.
Ramatoa Yang Xiaoqing:Mpanampy GM, Tompon'ny fampiasam-bola lehibe avy amin'ny University of Exeter, MBA avy amin'ny University of OKC. Talohan'ny nandraisany ny CEO, mpikaroka ambony ao amin'ny Gold Mind Investment Consultancy ltd.
Andriamatoa Wang Tianshuang:General injeniera, mari-pahaizana bakalorea, injeniera zokiny. Talohan'ny nandraisany teknisianina, mpitantana lefitra lefitry ny vatan-kazo Hebei Fengrun, Mpitantana ny orinasa Lida Coal Plant, mpitantana teknikan'ny Hebei Xuyang Chemical Group, injeniera jeneralin'ny Hebei solvent ltd.
Andriamatoa Wu Chaoyong: Dokotera avy amin'ny China Science Academy, talen'ny ivon'ny R&D, maodely fanavaozana ny orinasa siantifika Hebei
Ramatoa Hu Caijing:bakalorea manana mari-pahaizana lehibe simika avy ao amin'ny Zhengzhou Light Industry College, injeniera zokiny. Manana traikefa momba ny fividianana sy ny varotra 20 taona.
Fiofanana ho an'ny mpiasa: Kolontsaina sy adihevitra momba ny orinasa Zhongrong Enterprise
Fiofanana ho an'ny mpiasa iray manontolo
Ny fanadinanan'ny mpiasa rehetra, takiana maherin'ny 90 isa ho an'ny anaram-boninahitra rehetra
2019 Zhongrong Technology 32km Mitsangantsangana
2019 Fivoriana fanatanjahantena any Zhongrong Technology